စက် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > စက် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
စက် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-R ကို စီးရီး စက် operတစ်ဦးted လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ တစ်ဦး လွှဲ တစ်ဦးngle rတစ်ဦးnging အကြား 90Â° တစ်ဦးnd 270Â°, ထိုကဲ့သို့သော တစ်ဦးs လိပ်ပြာ vတစ်ဦးlves, bတစ်ဦးll vတစ်ဦးlves.AOX ပေးသွင်း အဆိုပါ အကောင်းဆုံး quတစ်ဦးlity စက် operတစ်ဦးted လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် မြင့်သော နည်းပညာ တစ်ဦးnd မြင့်သော perဘို့mတစ်ဦးnce.We တစ်ဦးre ကတိသစ္စာပြု သို့ ပေး ကောင်းသော ဝန်ဆောင်မှု တစ်ဦးnd ထောက်ပံ့ သို့ တစ်ဦးll ၏ ကျွန်တော်တို့၏ client များ တစ်ဦးround အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီးကို။
2. နယူးစက်မှုအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်: AOX-R ကိုစီးရီးမော်တာအတွက်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ပတ်ဝန်းကျင်၏လေးပုံတပုံအလှည့် actuator တွေ့ကြံလိုအပ်ချက် operated နှင့်ရေကိုရှောင်ကြဉ်၏သစ်တံဆိပ်ခတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ။
4. ရိုးရှင်းသောလက်စွဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ: AOX-R များ၏လက်စွဲစစ်ဆင်ရေးစီးရီးမော်တာ operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator Spanner နှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်, ITA, ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရ, အလုပ်သမား-saving ့။
AOX-R ကိုစီးရီးမော်တာလေးပုံတပုံအလှည့် actuator operated ၏ Module Module ရဲ့ပြင်ပ installation ကိုချမှတ်နှင့်ရှင်းလင်းသောဘုတ်အဖွဲ့ပိုကောင်းတက်တွင်စတင်။ ဒါဟာ actuator အများဆုံးအပူချိန်ကို C ° 120 တစ်ဦးနှင့်မော်ကျူးများ၏အီလက်ထရောနစ်ဒြပ်စင်အပူချိန်ကို C °သာ 70 A ကြောင်းဆန့်ကျင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများထုတ်ကုန်များ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု AOX-R ကိုစီးရီးမော်တာ operated လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ၏အရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရရှိသောနှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်အောင်ထားပါတယ် ထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
မေး: သင် AOX-R ကိုစီးရီးမော်တာလေးပုံတပုံအလှည့် actuator operated ဘို့ငါတို့လိုအပ်ချက်များကို suiting အဆိုပါဝင်းဒီဇိုင်းများကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: စက် operated လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်